ဖြိုး အလ်ဝိုင်: စာရေးသူ ပြောချင်ရာပြော ရောက်တတ်ရာရာ စကားများ(ပြောချင်ရာပြောဆိုလို့ အဓိပ္ပါယ်မရှိသောစကားကို ဆိုချင်းမဟုတ်)
စာရေးသူ ပြောချင်ရာပြော ရောက်တတ်ရာရာ စကားများ(ပြောချင်ရာပြောဆိုလို့ အဓိပ္ပါယ်မရှိသောစကားကို ဆိုချင်းမဟုတ်)
တကယ်တော့ စာရေးသူ ရည်ရွယ်ချက်က ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ မဟုတ်မမှန်သော အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြမယ်ဆိုတဲ့ ရည်၇ွယ်ချက်ပဲ ရှိတယ်...အခြားသူဘာသာဝင်များ ဆိုးတာကောင်းတာ စာရေးသူ စိတ်မ၀င်းစားဘူး...သူ့ပါသူ ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး စာရေးသူနဲ့ မသက်ဆိုင်ဘူး...စာရေးသူဖတ်ရတယ် ဂေါတာမက ကြာသပတေးမှာမွေးတယ် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ရာတဲ့ ရွှီးဗျို့  ရွှီး ရွှီး ....ယုံတဲ့ကောင်ကလည်း ယုံတာပဲ ဂေါတာမမွေးဖွားသည့်ခုနှစ်အား မည်သူ့မှ အတိအကျမဆိုနိုင်ချေ...
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အိန္ဒိယနုိူင်ငံမှာ တိကျမှန်ကန်သော ပြက္ခဒိန်မရှိလို့ ဖြစ်သည် မြန်မာတို့သုံးစွဲသော တနလာင်္၊ အင်္ဂါ ၊ဗုဒ္ဓဟူး ဆိုသည့်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ ဤနေ့ရက်များဟာ Monday၊Tuesday၊Wednesday စသည့်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ ဒီလို သူ့တို့နေ့ရက်များကို အခြေခံ၍ သုံးစွဲလာချင်းဖြစ်ပါတယ်......ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ပြက္ခဒိန်တကယ်ပင်ရှိခဲ့သလားဗျာ?????
အစပထမမှာ လူများက တစ်ပတ်ကို (၁၀)ရက် ၊ တစ်လမှာ ရက်သုံးဆယ်၊ တစ်နှစ်မှာဆိုရင် ရက်ပေါင်း ၃၆၀ ဖြစ်သွားမယ် သို့သော် အားလပ်ရက် ၅ ရက်ကို ထည့်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ တစ်နှစ်ကို ၃၆၅ ဖြစ်သွားမယ်...တစ်ပတ်မှာ ရက်က ဘယ်နှစ်ရက် တစ်လမှာ ဘယ်နှစ်ပတ် တစ်နှစ်ဘယ်နှစ်လဆိုတာ အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး...
ခင်ဗျာတို့ပါ ခင်ဗျာတို့ တီထွင်နိုင်မယ်ဆိုရင် တစ်နှစ်ကို ရက်ပေါင်း ၃၆၅ရက် ဖြစ်ဖို့ပဲ အရေးကြီးတယ်...ခင်ဗျာတို့ပါ ခင်ဗျာတို့ကြိုက်သလို့ တစ်ပတ်မှာ ၁၂ရက်ထားထား တစ်လမှာ ရက်(၂၀)ထားထား အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး အေး ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျာတို့ တီထွင်လိုက်တဲ့ ပြက္ခဒိန်ကို လူအများသုံးစွဲဖို့လိုတယ်နော်....
အဓိကကတော့ တစ်နှစ်မှာ ရက်ပေါင်း ၃၆၅ရက် ၅နာရီ ၄၉မိနစ် ၁၂စက္ကန့် ဖြစ်သွားဖို့ပါပဲ(နေကို ကမ္ဘာက ပတ်သော စက်ဝိုင်းလိုင်းကြောင်းကို အစွဲပြုယူချင်းဖြစ်သည်)....တစ်ပတ်မှ (၇)ရက်ဆိုသော အယူဆကို ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တို့ထံမှ ဆင်းသက်လာသည့်ဟု စာရေးသူ မှတ်ယူမိသည်...အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဖန်ဆင်းရှင်၏ (၇)ရက်ဆိုသော အယူဝါဒကြောင့် ဖြစ်သည်.......
ကမ္ဘာပြက္ခဒိန် တပတ်မှာ (၇)ရက် တစ်လမှာရက်ပေါင်းသုံးဆယ်(အကြမ်းဖျင်း)တစ်နှစ်မှာ ၃၆၅ရက်ဆိုတာတွေက အင်္ဂလိပ်တို့အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်သော အချိန်ကာလမှ စတင်ပြုပြင်လာနိုင်သလို ဒါမှမဟုတ် အ၈င်္လိပ်နယ်မချဲ့ ခင် အနောက်တိုင်းနိုင်ငံများသို့ မြန်မာများမှပညာသင်စေလွှတ်ခဲ့ရမှ ကမ္ဘာပြက္ခဒိန်လုပ်ပုံလုပ်နည်း ကို ယူ၍ လုပ်ခဲ့ချင်းဖြစ်မည့်ဟု စာရေးသူယူဆသည်....
နေ့ရက်အတိအကျမရှိလို့ မွန်တို့၏ယဉ်ကျေးမူ သင်္ကြန်ကိုတောင် အင်္ဂလိပ်ပြက္ခဒိန် အပေါ်မှာ အမှီပြုသုံးစွဲနေရတာပဲကြည့်လေ....(၄)လပိုင်း ဧပြီလ (၁၂-၁၃-၁၄)ဆိုတာ အင်္ဂလိပ်ပြက္ခဒိန်မှာ အမှီပြုသုံးစွဲထားချင်းဖြစ်သည်....(သင်္ကြန်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ ဓလေ့ထုံးစံမဟုတ်ပေ သင်္ကြန်ကို စာရေးသူမှမွန်တို့၏ယဉ်ကျေးမူဟု ကောက်ချက်ချမှတ်ယူသည် မွန်ယဉ်ကျေးမူကို ဆက်ခံသော ထိုင်း၊မြန်မာနှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံများမှာ ဒီပွဲတော်ရှိသည့်ဟုသိရသည်)
တနှစ်ဟာ ရက်ပေါင်း ၃၆၅ ရက်နဲ့ ၅နာရီ ၄၉မိနစ် ၁၂စက္ကန့် ရှိပါတယ်....တစ်နှစ်ကို ရက်ပေါင်း ၃၆၅လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ရာမှ ဒီအစွန်းထွက် ၅နာရီ ၄၉မိနစ် ၁၂စက္ကန့်ကို ထည့်မတွက်လိုက်ချင်းအတွက် နောက်လေးနှစ်မှာ တစ်ရက်နီးပါးလောက် နောက်ကျနေတယ်...(သို့ပါသော်ကြောင့် ရက်ထက်နှစ်ရှိသော နှစ်များတွင် ရက်ပေါင်း ၃၆၆ ဖြစ်သွားမည်။)
ထိုကြောင့် ၄နှစ်တခါကို ရက်ထက်နှစ်လို့ သတ်မှတ်လာကြတယ်.. အစပိုင်း နေ့ ရက်ရောထွေးမူများ ရှိခဲ့သောအကြောင်းကို ဂေါတာမ၏မွေးဖွားရက်ကိုအတိအကျဆိုသူများကို စာရေးသူမှ အရူးလို့ ဆိုပါရစေ.....တနလာင်္၊ အင်္ဂါ၊ဗုဒ္ဓဟူးစသော နေ့ရက်များအမည်များကို ဘယ်သူမှ ဘယ်ခုနှစ်လောက်မှာ စတင်သုံးစွဲလာချင်းကို စာရေးသူ သိချင်ပါတယ်????ဘယ်သူက စတင်တီထွင်လာတာလဲ???တီထွင်တာကလည်း ထူးဆန်းလေးစွ တစ်ပတ်မှာခုနှစ်ရက် တစ်လမှာ ရက်ပေါင်း ၃၀(အကြမ်းဖျင်း)ဆိုသော တစ်နှစ်မှာ (၁၂)လဆိုသော Gregorian Calendar နဲ့ဘာကြောင့်တူနေရတာလဲဗျာ????ဖန်ဆင်းရှင်အယူအဆရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်တွေထံမှ ဘာကြောင့်ခိုးချရတာလဲဗျာ...
ရှေ့ပိုင်းမှာ မှားယွင်းသော ပြက္ခဒိန်အား အဆင့်ဆင့် ပြုပြုင်ခဲ့ကြပါတယ်...နောက်ဆုံးမှာ လေးနှစ်တခါ ရက်ထက်နှစ်လို့ သတ်မှတ်လာရပါတယ်....Calendar wikiအကြောင်းကို ဖတ်ရင် ပိုရှင်းသွားနိုင်သည်....ဂေါတာမမွေးဖွားသည့်ခုနှစ်ကိုတောင် သမိုင်းပညာရှင်များက အမျိုးမျိုးခန့်မှန်းချေ ပေးကြသည်... BC 300 ကျော်မှ 400 ကျော်အတွင်းမှာ ဖြစ်မည့်ဟု အုပ်ချုပ်ခဲ့သောမင်းဆက်ကို ကြည့်၍၎င်း သုံးစွဲသောစကားကိုကြည့်၍၎င်း ခန့်မှန်းချေနဲ့ပင် ပြောကြရသည်။ နီပေါနိုင်ငံကို တည်ထောင်သည့်ခုနှစ် အနေအထားကို လိုက်ပြီး ခန့်မှန်းချေနဲ့ပင် ပြောနေရသည်...
ဒါကိုဗျာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက BC 500 ဆိုပြီး ကောက်ပြီးသိသလိုတတ်သလို လုပ်ချလိုက်တယ်ဗျာ...အခု BC 500 ကို အားမရသေးလို့ BC 563 ဆိုပြီး ထက်လုပ်လာတယ်....ခုနှစ်ကိုမှ လုပ်ချလို့ အားမရသေးဘူးဗျာ လအတိအကျနဲ့ နေ့ရက်အတိအကျပါ လုပ်ချလိုက်သေးတယ်ဗျာ... စာရေးသူ ဖတ်ပြီး တခွီးခွီးရီနေရတယ်ဗျာ...သြော် မသိရင်တော့ နေ့ရက်အတိအကျခုနှစ်အတိအကျနဲ့ပေါ့ဗျာ လူအထင်ကြီးအောင် လုပ်ချလိုက်တာ... (သူတို့လုပ်တာအကြောင်းမဟုတ်ဘူး..အိန္ဒိယမှာပြက္ခဒိန်ကော ၇ှိရဲ့လားလို့ပါ...ရှိရင် စာရေးသူကိုဖော်ပြပေးပါ တစ်ပတ်မှာ (၇)ရက်ဆိုသော အယူအဆ တစ်လမှာ ရက်သုံးဆယ်(အကြမ်းဖျင်း)၊ တစ်နှစ်မှာ ဆယ့်နှစ်လဆိုသော အယူအဆမျိုးကို ဘယ်သူက စတင်တီထွင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ စာရေးသူ အရမ်းသိချင်နေပါတယ်ဗျာ.....)
စာရေးသူ အကြံဥာဏ်တခုရတယ် လုပ်ချင်တယ် စိတ်ကူးပဲ ရှိတယ်... မွတ်စလင်မ်ကျမ်း၊ ခရစ်ယာန်ကျမ်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းသုံးခုကို အခြေခံပြီး ပို့စ်များ လုပ်ချင်တယ် သုံးခုကို နှိူင်းယှဉ်ပြချင်တယ်....ဒါပေမဲ့ စာရေးသူမှာ ဒီသက်ဆိုင်ရာဘာသာတရားအပေါ်ယံလောက်ပဲ သိတယ်...စာရေးသူအပေါင်းအသင်းထဲမှာ ဘာသာဝင်အစုံရှိတယ်..ဒါပေမဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုတော့ ရွံ့ မိတယ်....သူများဘာသာကို ပြောရရင် ရစရာမရှိအောင် မှိုချိုးမျှစ်ချိုးပြောရရင် ခွီးခွီး သဘောကျလိုက်မယ့် ဖြစ်ချင်း ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာဆိုရင် နည်းနည်းတောင် အထိမခံဘူး...
ဘာမှမကြည့်နဲ့ဗျာ ဂေါတာမကို ကုလားလို့ ခေါ်တာတောင် မကြိုက်ချင်ကြဘူး ...ဘယ်လို့လုပ်မလဲ အာရဗ်ကမ္ဘာကလူများကို ကုလားလို့ ခေါ်ရင် အိန္ဒိယနိုင်ငံသားများကို ပို၍ ကုလားဟု ခေါ်သင့်ပါတယ်....အိန္ဒိယနိူင်ငံသားကိုကြတော့ ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲ အရားကြီး(သို့) အနည်း လို့ခေါ်ရမလား(အနည်းလား အများလားတော့ မသိဘူးဗျာ နည်းနည်းများများပေါ့ ကုလားဆိုရင် ပြီးရောပေါ့)
အိန္ဒိယ နိူင်ငံမှာ မွေး အိန္ဒိထမင်းကိုစား အိန္ဒိယရေကိုသောက် အိန္ဒိယက ကုလားကို ကုလားလို့ မခေါ်နဲ့ဆိုတော့ အရားကြီးလို့ ခေါ်မယ်နော် ဟိီဟီး... ယခုလက်ရှိစာရေးသူ ပိဋကတ်သိုင်းကျမ်းကို ဖတ်နေတယ်.....ဖတ်တာတော့ တော်တော်များများ ဖတ်ဖြစ်တယ်....ယနေ့ဖတ်ပြီးသလောက်ဆို ကျမ်းမှသွန်သင်ထားသောစကားများက တလွဲကြီးတွေပဲဗျာ....ဘုန်းကြီး/ရဟန်းနာကိုပဲ လှူခိုင်းတယ်...
သူတောင်းစားကို မလှူခိုင်းဘူး ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူကို မလှူခိုင်းဘူး ကိုယ်ထက်နှိမ့်ကျတဲ့သူကို မလှူခိုင်းဘူး မရှိလို့ မလှူ မလှူလို့ မရှိ ဒါကြီးကိုပဲ အပ်ကြောင်းထပ်ပြောပြီး လှူခိုင်းတာကလည်း ဘယ်သူကိုမှမလှူခိုင်းဘူး.... ဘုန်းကြီး/ရဟန်းနာကိုပဲ လှူခိုင်းတာ...
စာထက်ရေးအုံးမယ်...အနဂ္ဂနဲ့ ဘာဘူ(လုပ်တာမဟုတ် မဟုတ်တာလုပ်)ဆိုတာကို အစွဲပြုပြီး သန်းရွှေနဲ့ ဂေါတာမ(လုပ်တာမဟုတ် မဟုတ်တာလုပ်)ဆိုပြီး ရေးမယ်လို့ စိတ်ကူးထားတယ်...သန်းရွှေကလည်း သူ၏အထက်ပိုင်းအရာရှိများနဲ့ သူတို့မိသားစုကောင်းစားရေးကို အလေးထားပြီး လုပ်ဆောင်တယ်...ဂေါတာမကလည်း သူ့ရဲ့ သူတောင်းစားဂိုဏ်းဝင် ဂိုဏ်းသားဂတုံးဘုန်းကြီးများကို ကောင်းစားရေးအတွက်ပဲ သွန်သင်ပေးခဲ့တယ်...ဒါကြောင့်မို့ သန်းရွှေနဲ့ ဂေါတာမ (လုပ်တာမဟုတ် မဟုတ်တာလုပ်) ဆိုပြီး ရေးသားမယ်လို့ စိတ်ကူးထားတယ်...
.စာရေးသူ အနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဒေါ်လာစားများကို စဉ်းစားချင့်ချိန်တတ်အောင် ပြသမှာပါ......ဒီမိုကရေစီဆိုပြီး လူကြားကောင်းအောင် အော်နေတဲ့သူတွေကို စာရေးသူနပ်ဖို့ စဉ်းစားထားတယ်.....သူတပါး မစင်ဆိုရင် လက်ညိုးထိုးလိုက်မယ့် ဖြစ်ချင်း ကိုယ်မစင်ဆိုရင် ထုံးဖြူးပြီ သကြားရောပြီ စားလိုက်ကြတာ....
စာရေးသူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကို မေးခွန်းလေးအနည်းငယ်လောက် မေးချင်တယ် ဂေါတာမက လေးသင်္ချေနဲ့ကမ္ဘာတစ်သိန်းကျင့်ကြံခဲ့ပြီးမှ ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်...ဂေါတာမရဲ့ နောက်ဆုံးဘ၀ကြမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဂိုဏ်းကိုတည်ထောင်တယ်ဆိုရင် လွန်ခဲ့သောဘ၀များက ဂေါတာမက ဘာလူမျိုးလဲ????? ဘာဘာသာဝင်လဲ?????
သူ့အတိုင်းကျင့်ကြံအားထုတ်မှ နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်ဆိုတော့ သူရဲ့ဘ၀ဖြစ်စဉ်များကို သိသင့်တယ်လို့ စာရေးသူယူဆတယ်လေ...သို့ပါသော်ကြောင့် သူ့ကျင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့သော လေးသင်္ချေနဲ့ကမ္ဘာတစ်သိန်း၏ ဘ၀ဖြစ်စဉ် အပြည့်အစုံများကို ဖော်ပြပေးပါ...ယုန်မင်းဖြစ်စဉ်ကို ဖျက်လိုက်ကြတယ်...ဟိုတုန်းက ဂေါတာမနောက်ကြောင်းဘ၀ဖြစ်စဉ်များကို တင်ထားတဲ့ ၀က်ဆိုဒ်များမှာယုန်မင်းဇာတ်ကို တင်ထားတယ်....အခုစာရေးသူရေးပြီးတဲ့နောက်မှာယုန်မင်း ဇာတ်ကို ဖျက်လိုက်တာကို တွေ့ရပါတယ်....
ကျမ်းအမှားအယွင်းကြီးကို လူအသိမခံချင်ကြတော့ ဖျက်လိုက်ကြတာပေါ့လေ...လုပ်လုပ် များများလုပ် ဒီလိုနည်းလမ်းမျိုးတွေနဲ့ လူတွေရဲ့ယုံကြည်မူကို လိမ်ညာမူနဲ့ ယူနေကြ ငနာဂတုံးတွေ မင်းတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ထိုင်ပြီးအခန့်သားနဲ့ စားချင်နေလို့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အတင်းအဓမ္မ အသက်သွင်းနေကြ ....မင်းတို့လိမ်လေ ငါ့အတွက် ပြောခွင့်ရလေပဲ...